Telefishanka beIN Sports Oo Shaaciyey Wariyeyaasha Tabin Doona Kulamada Maanta - Yaa Qabanaya Everton vs Liverpool & Man City vs Arsenal - Gool24.Net
Telefishanka beIN Sports Oo Shaaciyey Wariyeyaasha Tabin Doona Kulamada Maanta – Yaa Qabanaya Everton vs Liverpool & Man City vs Arsenal
Telefishanka beIN Sports ayaa shaaciyey wariyeyaasha ku qoran baahinta kulamada horyaallada Yurub ee maanta oo Sabti ah oo ay dhacayaan ciyaarihii ugu adkaa ee inta badan kooxaha waaweyn.
Horyaallada Premier League, LaLiga iyo Serie A ayay kooxaha waaweyn maanta illaa caawa ciyaari doonaan maadaama ay toddobaadkan jiraan kulamada Champions League oo ay tahay inay u helaan waqti ay ugu diyaar-garoobaan.
Premier League ayay ciyaaraha ugu adag ka dhacayaan, waxaana garoonka Goodison Park ku ballansan Everton iyo Liverpool oo kulan natiijadiisu saamayn ku yeelan doonto miiska kala-sarraynta horyaalka isku haleeli doona, kaas oo lagu tilmaamay ciyaartii ugu adkayd ee labadan kooxood ay abid ku kulmaan.
Arsenal ayaa iyaduna ku sugan magaalada Manchester oo ay kulasoo ciyaarayso Man City, halkaas oo labadii saaxiib ee Guardiola iyo Arteta ay foodda isku darayaan.
Waddanka Talyaaniga ayay labada kooxood ee ka wada dhisan Magaalada Milan ee Inter iyo AC Milan ay foodda isku darayaan, halka Juventus oo uu ka maqan yahay Cristiano Ronaldo ay ciyaari doonto.
Geesta kale, Spain ayay labada kooxood ee waaweyn ee Real Madrid iyo Barcelona la kala ciyaarayaan Cadiz iyo Getafe waxaana ay kaddib isku diyaarin doonaan kulamadooda Champions League oo ay ugu sii xigi doonaan ciyaarta sida weyn loo sugayo ee Sabtida usbuuca dambe ee El Clasico oo labadooda (Real Madrid iyo Barcelona) ay foodda isku dari doonaan.
Haddaba telefishanka beIN Sports qaybtiisa luuqadda carabiga ayaa kulamadan waaweyn ee maanta iyo caawa baahin doona, waxaana uu sii shaaciyey wariyeyaasha daadihin doona ciyaarahan ee daawadeyaasha kala socda shaashaduhu ay codkooda ku maqli doonaan.
Wariyaha codka macaan ee Rauf Khaliif ayaa loo doortay inuu qabto kulanka Inter Milan iyo AC Milan oo xamaasaddiisu sarrayso, halka saaxiibkiisa kale ee ay dadku xiiseeyaan inay codkiisa ku maqlaan ciyaaraha ee Cusaam Shuwaali loo doortay kulanka qaaradda Afrika ka dhacaya ee ay labada kooxood ee Al Wydad Al-Riyaadi iyo Al Ahly ay jilbaha isku dhigan doonaan.
Ciyaarta Merseyside derby ee Everton iyo Liverpool ayaa loo doortay inuu qabto Xafiid Daraji, halka Manchester City iyo Arsenal uu daadihin doono Khaalid Xaddi.
Sida wariyeyaashu ugu kala qoran yihiin kulamada Maanta
Everton vs Liverpool – Xafiid Daraji
Napoli vs Atalanta – Caamir Khadiiri
Chelsea vs Southampton – Axmed Baluushi
Celta Vigo vs Atletico Madrid – Xasan Caydaruus
Sassoulo vs Lazio – Axmed Cabdi
Inter Milan vs AC Milan – Rauf Khalif
Manchester City vs Arsenal – Khaalid Xaddi
Real Madrid vs Cadiz – Maxamed Barakaat
Crotone vs Juventus – Jawad Badat
Newcastle vs Manchester United – Cali Maxamed Cali
Getafe vs Barcelona – Yuusuf Sayf